Soo -saarayaasha & Alaab -qeybiyeyaasha dhalista | Shiinaha dhalista Factory
Raadinta kubbadda qotodheerta waxay xambaari kartaa culeyska radial iyo axial, u oggolow xawaaraha sare ee wareegga. Dhalashada jeexdin qotodheerta waa mid aan la kala saari karin. Xirmidda kubbadda qotada dheer ee la shaabadeeyey waa bilaa dayactir waxayna ka dhigeysaa qaab -dhismeed la fududeeyo.
Shayga rullaluislaha irbaddu waa nooc gaar ah oo duudduuban, oo ku qalabaysan rollers dhuuban oo dhaadheer. Dhexroorka (D) ee rullaluushani wuxuu ka yar yahay 5mm, L/D wuxuu ka badan yahay 2.5 (L waa dhererka duubista). Waxay la mid tahay cirbadda, markaa waxaa loogu yeeraa rullaluqa irbadda
Dhalista rullaluistemadka cylindrical waa nooc ka mid ah dhalista kala -go ', fududahay in la rakibo oo la kala -diro. Saa'idka Kuwani waxay leeyihiin awood dhalista sare. Naqshadeynta qaab -dhismeedka cusub ee flange -ka iyo wejiga dhammaadka rullaluudka ma aha oo kaliya hagaajinta awoodda qaadista axial, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa xaaladda saliidda ee aagga xiriirka u dhexeeya wejiga dhammaadka rullaluudda iyo flange -ga, waxayna wanaajisaa waxqabadka adeegga bearin
Kubadda naxaasta ee H65, Kubbadda Naxaasta ee Adag, Kubadda naxaasta, Kubadaha Copper -ka Yar, H62 Kubadda Naxaasta, Madax Ball Check naxaas,